Momba anay | Yuyao Sanxing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.
Yuyao Sanxing Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.dia orinasa mpiorina mitambatra amin'ny famokarana, fikarohana ary fampandrosoana ny vokatra elektromekanika. Ny orinasa dia miavaka indrindra amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana ny actuators tsipika, boaty fanaraha-maso, ny fahitalavitra take-off sy ny fipetrahana, ny fananganana fanaka sy ny vokatra hafa, ary mamorona tsikelikely famokarana manokana.
Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny sezika elektrika, seza fanorana, seza nify, fandriana ara-pahasalamana elektrika, fandriana mihetsiketsika, kaontera mihetsika amin'ny fahitalavitra, fanaka sy hetsika hafa mila maso ivoho mihetsika amin'ny hetsika. Mora be ny mametraka azy. Nandalo ny fanamarinana CE Eoropeana ary mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny torolàlana ROHS EU. Ampiasaina betsaka amin'ny fialamboly, fanaka, akora simika, fitsaboana ary sehatra hafa izy ireo.
Manana vondrona mahery fo, manavao ary tafaray izahay. Miaraka amin'ny haitao mivoatra avy any ivelany, marika manta malaza ary ny fiezahana maharitra, ny vokatra dia manana kalitao tena tsara. Tongasoa eto amin'ny orinasanay mba hijerena sy hanome soso-kevitra mahasoa.
Actuator Linear Micro, Fanaraha-maso lavitra an-tariby ho an'ny hopitaly, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana any amin'ny hopitaly, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana elektrika, Actuator haingam-pandeha haingam-pandeha, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana fitsaboana,